उपत्यकामा कस्ता व्यक्तिलाई देखिएको छ कोरोना ? – Sanchar Patrika
उपत्यकामा कस्ता व्यक्तिलाई देखिएको छ कोरोना ?
July 3, 2020 324
काठमाडौं । बुधबारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार उपत्यकामा १ सय १७ जना व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ।
इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार संक्रमितमध्ये १२ जना भने ट्राभल हिस्ट्री नभएका छन्। अर्थात कसैको पनि सम्पर्कमा नपुगेका व्यक्तिमा पनि संक्रमण देखिएको छ।
यीबाहेक अन्य संक्रमित भने विदेशबाट आएका हुन्। महाशाखाका निर्देशक डा। बासुदेव पाण्डेले अधिकांश संक्रमित दुबई, कतार र भारतबाट आएको जनाए।
उनका अनुसार दुबईबाट आएकामध्ये १५ जनामा संक्रमण देखिएको छ। उपत्यकामा ट्राभल हिस्ट्री नभएका व्यक्तिमा पनि संक्रमण देखिएपछि यसले जोखिम बढ्ने चिन्ता थपेको छ।
निर्देशक पाण्डेले यसरी विदेशबाट पनि नआएको र कतै नगएको व्यक्तिमा पनि संक्रमण देखिनुले यसले समूदायमा थप संक्रमण देखिन सक्ने बताए। ट्राभल हिस्ट्री नभएका १२ जना संक्रमितहरूमा कोही बच्चा, गर्भवती, सुरक्षागार्ड, नेपाली सेनामा कार्यरत व्यक्तिहरू रहेको उनले बताए।
उनका अनुसार मेडिसिटी अस्पतालमा कतै नगएका साढे दुई वर्षको बच्चा र नर्भिक अस्पतालमा एकजना गर्भवती महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको छ।
कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको समेत नेतृव्त सम्हालेका पाण्डे भन्छन्, ‘कतै बाहिर नगएको व्यक्तिमा पनि संक्रमण देखिएको छ। त्यसैले साँच्चिकै यी व्यक्तिहरूलाई मात्र संक्रमण भएको हो कि बाहिर पनि संक्रमण फैलिएको छ भनेर हामीले त्यस्ता ठाउँ वरिपरिको प्रतिनिधिमुलक नमूना लिएर परीक्षण गर्ने तयारी गरेका छौं।’
उनले त्यस्ता संक्रमितहरू उपत्यकाका विभिन्न ठाउँका रहेको भन्दै अब ती व्यक्तिहरूको आवतजावत बढी हुने तरकारी पसल, रेस्टुरेन्ट र वरिपरिका व्यक्तिको पनि परीक्षण गर्ने तयारी रहेको बताए। यसले समस्या कहाँसम्म पुग्यो भन्ने आँकलन गर्न सहयोग पुर्याउने उनको विश्वास छ।
उपत्यकामा पछिल्लो समय विभिन्न पेशाकर्मीमा संक्रमण देखिन थालेको छ। रसियन दूतावासमा कार्यरत एकजना सुरक्षागार्डमा पनि संक्रमण देखिएको छ। यस्तै बाहिरी जिल्लाबाट उपचारका लागि उपत्यका भित्रिने व्यक्तिहरूमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। केही संक्रमितहरू स्वास्थ्यकर्मी समेत रहेको पाण्डेले जानकारी दिए। यसरी उपत्यकामा कतै नगएको व्यक्तिमा पनि संक्रमण देखिन थालेपछि ‘लोकल ट्रान्समिसन’ थप फैलिने जोखिम बढेको छ।
निर्देशक पाण्डे भन्छन्, ‘अब चिन्ता के छ भने यो छिटपुट रुपमा लोकल ट्रान्समिसन त देखियो तर यो कुन तहको हो भन्नलाई चिन्ताको विषय बनेको छ।’ उपत्यकामा ठूलो जनघनत्व भएकाले पनि विशेष ध्यान दिइएको उनको भनाइ छ। उनले उपत्यकामा संक्रमण फैलिए नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुने बताए। त्यसैले ठूल्ठूला सहरहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको जोड छ। निर्देशक पाण्डेले अहिलेको संक्रमणस्थिति हेर्दा यो ढिलोचाँडो समुदायस्तरमा पुग्ने जिकिर गरे।
‘काठमाडौं र देशभरको स्थिति हेर्दा कुनै बेला यो रोग समुदायमा जान्छ र जानैपर्छ’ उनले भने, ‘यसको कुनै खोप वा औषधि छैन। त्यो हिसाबले यो रोग एकदिन समुदायमा जान्छ नै।’
त्यसैले काठमाडौंको लागि विशेष रणनीति अपनाउने तयारी रहेको उनले बताए। ‘काठमाडौंमा पनि सुकुमवासी टोलमा एकजना संक्रमित भेटिनुभयो। त्यहाँ मानिसको बाक्लो वस्ती छ। त्यसैले त्यस्ता ठाउँहरूलाई बढी केन्द्रित गर्ने सोचेका छौं,’ निर्देशक पाण्डेले भने।
अहिले उत्यकामा संक्रमण रोक्ने प्रयास भइरहेको भएपनि सतर्क नहुँदा हामी आफैंले संक्रमणलाई समुदायमा लान खोजेको उनको भनाइ छ। अहिले नेपालीलाई कोरोनाले केही गर्न सक्दैन भन्ने सोच आएको र सचेत नहुँदा यो समुदायमा जाने उनी दाबी गर्छन्।
अब संक्रमण रोक्न कन्ट्याक्ट ट्रेसिङभन्दा पनि सर्वसाधारण आफैं सचेत हुनुपर्ने उनी बताउँछन्। उपत्यकामा समेत शतप्रतिशत कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ प्रभावकारी बनाउन नसकिएको स्वीकार गर्दै पाण्डेले भने, ‘टेकु अस्पतालमा परीक्षण गर्न आउनुहुन्छ तर उहाँहरू त्यहाँ आउँदा केमा आउनुभयो, बाटोमा को-को सँग भेट्नुभयो ? ती व्यक्तिहरू ट्रेसिङ गर्न छुटेका छन्।’
पोजेटिभ देखिएपछि मात्र ट्रेसिङको काम सुरु गर्दा त्यो बीचमा लक्षण नभएपनि संक्रमितले अरूलाई सार्ने संम्भावना रहेको भन्दै निर्देशक पाण्डेले उपत्यकामा संक्रमण थप बढ्न सक्ने बताए। उनले उपत्यकालाई लक्षित गरेर छुट्टै रणनीति तय गरिएको बताए।
यसका लागि सुरुमा संक्रमित बस्ने ठाउँको वरिपरि परीक्षण गर्ने र त्यहाँ पनि संक्रमण देखिए ठूलो समूहमा परीक्षण गर्ने महाशाखाको तयारी छ। उनले काठमाडौंमा ठूलो संख्यामा परीक्षण हुन नसकेको भन्दै परीक्षणको दायरा पनि बढाउनुपर्ने बताए।
यसअघि उपत्यकामा समूहगत रुपमा झण्डै १५ हजार जनाको पिसिआर विधिबाट परीक्षण गरिएको थियो। जसमा कालिमाटी तरकारी पसल, महानगरपालिकाको सरसाफाइमा काम गर्ने कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र पत्रकारहरूको समेत परीक्षण गरिएको थियो।
त्यसयता भने योजना बनाएर समूह-समूहमा परीक्षण गरिएको छैन। पछिल्लो समय उपत्यकामा बाहिरी जिल्लाबाट मानिसहरूको आवतजावत हुने, तेस्रो मुलुक लगायत भारतबाट पनि आएकाले थप जोखिम बढेको हो। निर्देशक पाण्डेले भारतबाट आएकाहरूमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको जनाए।
‘हामीले के बिर्सिनुहुँदैन भने हामी भारतसँग जोडिएका छौं। त्यसैले जहिलेसम्म भारतमा यो रोगको नियन्त्रण हुँदैन नेपालमा नियन्त्रण गर्न गाह्रो छ,’ उनले भने। निर्देशक पाण्डेले अब कोरोना साथीजस्तै भएको र योसँगै जानुपर्ने बाध्यता आइपरेको जनाए। अब यो ठाउँमा कोरोना छ भन्ने सोचेर हिँड्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
त्यसका लागि अनिवार्य मास्क लगाउने, साबुनपानीले हात धुने, स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। साथै काठमाडौं जस्तो धेरै जनघनत्व भएको ठाउँमा तरकारी पसल र भिडभाडमा जाँदा सुरक्षा अपनाउनुपर्ने उनी बताउँछन्। उनले अब काठमाडौं उपत्यकामा विशेष ध्यान अर्को रोग भएका व्यक्तिहरूलाई दिनुपर्ने बताए। जसमा मुटु, मिर्गौला, दमका रोगी पर्छन्। साथै गर्भवती महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
निर्देशक पाण्डेले उपत्यकामा संक्रमण थप बढ्नसक्ने भन्दै अस्पतालहरूलाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने बताउँछन्। उपत्यकामा संक्रमण कहाँ-कहाँ पुगेको छ भनेर पत्ता लगाउन महाशाखाले ‘कन्ट्याक्ट इन्भेस्टिगेसन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ नामको ‘डेडिकेटेड टिम’ बनाएर काम अघि बढाउने तयारी गरेको छ। यो टिम स्थानीय तहमा समेत रहने भएकाले उपत्यकामा पनि महानगरमा भएका टिमसँग सहकार्य गरेर ट्रेसिङको काम गरिने निर्देशक पाण्डेले बताए। अहिलेसम्म उपत्यकामा देखिएका अधिकांश संक्रमित भने तेस्रो मुलुकबाट आएका छन्।
विदेशबाट आउने व्यक्तिहरूलाई अनिवार्य पिसिआर रिपोर्ट ल्याउन भनेपनि सबैले पिसिआर टेस्ट नगरेको र त्यस्ता व्यक्ति पिसिआर नेगेटिभ आएका व्यक्तिहरूसँगै बस्ने भएकाले संक्रमण सर्ने संम्भावना त्यहाँ पनि रहेको उनले बताए।
निर्देशक पाण्डेले अहिले कतै नगएका मानिसहरूमा संक्रमण देखिए पनि यो अहिले नै समुदायमा नगएको दाबी गरे। यसअघि स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले ६ प्रतिशत संक्रमण समुदायमा गएको जनाएका थिए।
‘मन्त्रीले पनि हामीले भनेकै सूचानाका आधारमा भन्ने हो’ उनले भने, ‘समुदायमा भन्नलाई ठूलो संख्यामा संक्रमित हुनुपर्छ जसको कुनै पनि ट्राभल हिस्ट्री हुनुहुन्न। त्यसैले केही ठाउँमा धेरै व्यक्तिमा देखिएको ‘क्लस्टर केस’ हो तर समुदायमा गएको छैन।’ सेतोपाटीबाट
Prevकाठमाडौं बानेश्वरका एक जनाको को’रोना सं’क्रमणकाबाट मृ’त्यु !
Nextसडक विभागका इञ्जिनीयरविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि आजदेखि लागू हुने गरी यस्ता कार्य पुर्ण रुपमा निषेध